Red's Rose Dream: December 2008
Posted by Red's Rose Dream at 09:22
Lucky_ Jason Mraz
Ooooh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh o oh
Posted by Red's Rose Dream at 00:58
Bling Bling တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး နဲနဲပြောပြချင်လို့ပါ။ အခုခေတ်မှာ ရောင်တောက်ပြီး လှနေတဲ့ ရင်ထိုးတွေ၊ နာကပ်တွေ၊ ဆွဲသီတွေ၊ ကလစ်တွေ အရမ်း ခေတ်စားလာ ပြီး ဒီဇိုင်းမျိုးစုံရှိနေတော့ ကျွန်မတို့ မျက်စိကျစရာဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခတ်တာက အဲ့ဒီ အရောင်တောက်တဲ့ ကျောက်တွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပစ်စည်းတွေက ကျောက်တွေက ကျွတ်ထွက်၊ ပြုတ်ထွက်သွားရင် တော်တော်ကြည့်ရရုပ်ဆိုးပြီး ဆက်ပြီး မသုံးချင်စရာဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်မမှာ မသုံးဘဲ သိမ်းထားဖြစ်တဲ့ ကလစ်တွေ ရှိနေတယ်။ ကြိုက်လွန်းလို့ ဆက်ပြီး သုံးနေတဲ့ နာဆွဲတွေ ရှိနေတယ်။ ကျောက်တွေကို ကော်နဲ့ကပ်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် မအောင်မြင်တာများပါတယ်။ ခဏနေကျတော့ ပြန်ပြုတ်ထွက်ကုန်ရော ကိုယ်ကလည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့လူမဟုတ်တော့ ကော်တွေက ပြန့်ကုန်ပြီး တစ်ခြားကျော်ကတွေပါ မလှ ဖြစ်ကုန်လို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေတာ။ အဲ့ဒီကျောက်တွေနဲ့ ဟာတွေကို မ၀ယ်ရဲအောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ လှကလည်းလှ၊ လိုကလည်း လိုချင်၊ ၀ယ်လည်းမ၀ယ်ရဲဖြစ်နေတာ။
မနေ့ကတော့ အစ်မတစ်ယောက်က နည်းပြောပြပါတယ်။ အဲ့ဒါက စစချင်း ၀ယ်ဝယ်ပြီးချင်းကို လက်သည်းနီ အကြည့်ရောင်(ပေါလစ်)နဲ့ သုတ်ထားလိုက်ရင် တော်တော်ကြာတဲ့အထိ ကျောက်တွေမပြုတ်ဘဲ ခံတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျောင်တော့ နဲနဲရောင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျောက်တွေ ပြုတ်ပြီး ရုပ်ဆိုးနေတာထက်စာရင်တော့ အဲ့ဒီလို လုပ်လိုက်တာပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ဒီနေ့ဘဲ အိမ်မှာရှိသမျှတွေကို လိုက်ပြီး သုတ်ထားလိုက်တယ်။ အရောင်လည်း ပိုတောက်လာတယ်လို့ ထင်ရတယ်။ ပြုတ်နေတဲ့ ကျောက်တွေလည်း စမ်းပြီး တပ်ထားကြည့်တယ်။ အဆင်ပြေမလားဆိုပြီးတော့။ ဟောင်းတွေ ဖြစ်နေပေမယ့်ထပ်ပြီး မကျွတ်တော့အောင်ပါ။ နောက်ခါ ၀ယ်မယ့် ဟာတွေကလည်း သုတ်ဖို့ ရယ်ဒီဖြစ်နေတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မကြိုက်တဲ့ Bling Bling တွေကို တော်တော်ကြာကြာခံအောင်သုံးလို့ ရတော့မယ်ဆိုပြီး ပျော်နေမိတယ်။
Posted by Red's Rose Dream at 00:50
Posted by Red's Rose Dream at 14:04
Posted by Red's Rose Dream at 14:05
ဒီရောက်ပြီးမှ သွေးလှူတာတွေလုပ်ဖြစ်တယ်။ ကိုဇူလိုင်တိုက်တွန်းတာလဲပါမယ်ထင်တယ်။ ကိုယ်ကလည်း အစကတည်းက လှူချင်နေတာ အဆင်မပြေလို့ မလှူခဲ့ရတာဆိုတော့ ဒီရောက်ပြီးမှ သွေးလှူဖြစ်တယ်။ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့က တတိယအကြိမ်မြောက် သွေးလှူဖြစ်တယ်။ အရင်အခေါက်တွေတုန်းက ကင်မရာလည်း မရှိတာနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေဘာတွေမရိုက်ခဲ့ရဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ ရိုက်ဖြစ်တယ်။
ကီလို ၆၀ ကျော်ရင် သွေး ၄၅၀ ယူပါတယ်။ အခုပုံက ၃၂၂ ဂရမ်ရှိတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ဘာသာ ရိုက်ထားတာပါ။
သွေးတွေ မြန်မြန်ထွကအောင်လို့ ပိုပြီး ညစ်မိတယ်။ သွေးလှူတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ထဲကသွေးတွေ ပိုက်ကနေ စီပြီး ဆင်းသွားချိန်မှာ ပူကနဲဖြစ်သွားရင် ကြည်နူးမိတယ်။
ဒါက ဒီတစ်ခါရတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးပါ။ နောက်က ရင်ထိုးကတော့ ကိုဇူလိုင်ဆီက ဓါးပြတိုက်ထားတာ။ စင်္ကာပူ ဘလောဂ့်ဂါသွေးလှူပွဲတုန်းက သွားခဲ့ပါတယ်။ ရက်လိုနေသေးလို့ မလှူခဲ့ရဘူး။ ဒီအတိုင်းပြန်လာခဲ့ရတယ်။ စိတ်တောင် မကောင်းဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့ဆို လှူလို့ရနေပြီ။ မပြန်ခင်တော့ လှူဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
Posted by Red's Rose Dream at 12:05
ကာတွန်းနဲ့ ပက်သက်လို့ပြောရရင် ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးက Tom and Jerry ကာတွန်းပါ ဒီကာတွန်းကားတွေ ဘယ်လောက်ရှိလဲ ကျွန်မ သေချာမသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများကြည့်ဖူးတယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားက လာတိုင်းလဲ အမြဲကြည့်ဖြစ်တယ်။ဘယ်လောက်ကြည့်ကြည့် ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ကာတွန်းကာတွေထဲမှာ Tom and Jerry က ထိပ်ဆုံးကပါနေပါတယ်။
အကြိုက်ဆုံးက သူတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လောက်ဘဲ ရန်ဖြစ်ဖြစ် အမြဲပြန်တည့်တာကိုပါ။ ပြီးရင် ဘယ်တော့မှ သူတို့အကျင့်တွေကိုမပြင်ကြဘူး။ တချို့ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ ပညာပေးခန်းလေးတွေပါတာသဘောကျတယ်။ ကလေးတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းကတချို့သိသင့်တာလေးတွေ သိအောင် ပညာပေးတဲ့အခန်းလေးတွေ အရမ်းသဘောကျတယ်။ ပြီးတော့ Jerry ကCheese ကိုမြင်ရင်လေထဲမြှောက်ပြီးပါသွားတာလေး သဘော ကျတယ်။ ပြီးတော့ ကြွက်မလေးတွေ၊ ကြောင်မလေးတွေ မြင်ရင် နှစ်ကောင်စလုံး မျက်နှာပိုးမသတ်နိုင်တာ ကိုလည်း သဘောကျတယ်။ နောက်ပြီး Tom ဘယ်လောက် ယုတ်မာမာ Jerry က အသနားခံရင် သနားတက်တဲ့ Tom ကို သနားမိတယ်။ အကြိုက်ဆုံးတွေထဲမှာ Tom and Jerry က ထိပ်ဆုံးက။ ကျွန်မ ဂိမ်းတွေ သိပ်ပြီးမကစားပေမယ့် Cartoon Network ထဲက Tom and Jerry ဂိမ်းလေးတော့ ဆော့ဖြစ်တယ်။ ဒီကနေ သွားပြီး ဆော့လို့ရတယ်။
နောက်ထပ် character တစ်ခုကတော့ Donal Duck သူ့ကိုလည်း အရမ်းသဘောကျတယ်။
ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာနဲ့ သိပ်ပြီးချစ်စရာကောင်တဲ့ character တစ်ခုမို့ပါ။ သူ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ တော်တော်များများ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူနဲ့တွဲပြီးပါလာတဲ့ သူဌေးကြီးနဲ့ ဘဲကလေးသုံးကောင်း ဇာတ်လိုက်တွေကိုလည်း ကြိုက်တယ်။သူဌေးကြီးကပ်စီးနှဲတာကိုလည်း အရမ်းသဘောကျတယ်။ Donald Duck နဲ့တွဲပြီး ပါတတ်တဲ့ Goofy ကိုလည်း သဘောကျတယ်။ စကားပြောရင် အသံသြသြကြီးနဲ့ အမြဲ အမှားတွေ လုပ်တတ်တဲ့ Goofyကိုလည်း သဘောကျတယ်။ သူက မြန်မာပြည်က ကာတွန်းပိုးဇာကိုမျက်စိထဲ အမြဲတွဲပြီး မြင်မိတယ်။ အမြဲပြာရာခတ်တတ်တဲ့ ဘဲလေးက ချစ်စရာလေးပါ။ ငယ်ငယ်က သူပုံတူတွေဆွဲဖူးတယ်။ အရမ်းကြိုက်လို့။
နောက်တစ်ခုက ငယ်ငယ်တုန်းက စွဲစွဲမြဲမြဲကြည့်တက်တဲ့ လိပ်နင်ဂျာ။ သူတို့တွေကိုကြည့်ပြီး ပီဇာစားချင် ခဲ့တာအရမ်းပါဘဲ။ ရူးတာ။ ဇာတ်လမ်းပြီးသွားရင် ပီဇာမှားပြီး အလုအယက်စားတာ အရမ်းသဘောကျတယ်။ အိမ်မှာလည်း သူတို့လို သိုင်းကျင့်ရတာ မောလို့။ မျက်နှာကြီးကြီးချစ်စရာကောင်းတယ် ပြီးတော့လည်း ၀တုတ်နေပေမယ့် ပေါ့ပါးသွတ်လတ်တဲ့သူတို့ ပုံစံကိုအရမ်းဘောကျ မိတယ်။
နောက်ထပ်က Woody Wood Parker သူ့ရဲ့ စရိုက်က အရမ်းကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမယ့် အရမ်း သဘောကျတယ်။ ရီရတယ်။ သူ့ရဲ့ရီတဲ့ပုံစံကို အရမ်းဘောကျတယ်။ ဟ ဟ ဟ ဟာ ဟ ဟ ဟ ဟာ ဟ ဟ ဟ ဟာ ဟဟဟဟဟဟ အဲ့ဒီလို ရီတဲ့တတ်တဲ့သူ့ကိုအရမ်းဘောကျတယ်။ သူကဇာတ်လမ်း တွဲတွေအများကြီး မရှိပေမယ့် သူရဲ့ character ကလည်း အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ character တစ်ခုတော့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ထိ မရိုးတန်းကြည့်ဖြစ်တဲ့ cartoon character တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင် ကြီးလာမှကြိုက်တာ Simpson က characterတွေကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ သူက ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်ပြီးပြောင်း ပေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ Simpson က အခုဆို သက်တမ်း၂၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်း တွေမှာ ကြီးလာတဲ့လူတွေကသူ့ကို အရမ်းကြိုက်ကြတယ်။ US က စစ်တမ်းတွေအရ အအောင်မြင်ဆုံး ကလေး သရုပ်ဆောင်တွေထဲက (လူတွေထဲမှာကို) သူက ထိပ်ဆုံးမှာ ဗိုလ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက သိပ်ပြီး မကြိုက်ခဲ့ပေမယ့် အခုကြီးလာတော့တော်တော်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွဲလေးပါ။ အိမ်မှာ ဖေဖေက အစ အဲ့ဒီ Simpson ကိုကြည့်တယ်။ အားလုံးညှိစရာမလိုဘဲ ကြည့်ဖြစ်တာ အဲ့ဒီ ကာတွန်းကားတစ်ခုဘဲ ရှိမယ်ထင်တယ်။ ပြီးတော့ သူက မိသားစုမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာတွေကိုဇာတ်လမ်းဆင်ပြီး ရိုက်ထားဆိုတော့ တော်တော်လေး ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။
နောက်ပြီး ထပ်ဖြည့်ပြောစရာရှိတာက ကျွန်မကြိုက်ခဲ့တဲ့ ကာတွန်း ကာရိုက်တာတွေလိုဘဲ ကျွန်မအခု ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာပါဘဲ။ အမြဲပြာယာခတ်တတ်တဲ့Donald လို၊ ဒေါသကြီးတတ်တဲ့Donaldလို၊ Woody လိုလဲ အမှားအမြဲလုပ်ပြီး ပြီးရင် နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်။ သူတို့ဆီက ကောင်းတာတစ်ခုကတော့ ဘယ်ကာတွန်း ကာရိုက်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရင်း ကောင်းအောင်ထားရမယ်ဆိုတာ လေးတစ်ခုကို ကျွန်မဆီကို ရောက်အောင် သင်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ ကျွန်မမှာ အဲ့ဒီကောင်းတာလေး တစ်ခုတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဟီးး ထင်တာပြောတာလေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ စိတ်ရင်းကောင်းတယ်ထင်တာဘဲ။ တခြားလူတွေကတော့ ဘယ်လိုထင်လဲ မသိပါဘူး။
Tag ပိုင်ရှင်ကတော့ ဘယ်လို စိတ်ကူးပြီး Tag လိုက်တယ်မသိဘူး။ ကျွန်မကတော့ ကျွန်မကြိုက်တဲ့ ကာရိုက်လေးတွေဘဲ ရေးလိုက်တယ်။ Woody လို လုပ်ချင်ရာလုပ်တယ်ပေ့ါ။ တခြား ကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေ တော်တော်များများက Tag ထားတဲ့ ကိုဇူလိုင်ဆီမှာဘဲ သွားကြည့်လိုက်ပါ။ သူ ရေးထားတာ အားလုံးနီးပါ လောက် ကျွန်မ ကြိုက်တာနဲ့ တူနေတယ်။ အဲ့ဒီထဲက တချို့ကို ဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်။
အဲ့ဒီထဲက မင်းသမီးနဲ့ ကျွန်မနဲ့တူတယ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေက ပြောကြတယ်။ ပြီးတော့ ဒီထဲက မြည်းနဲ့ ကြောင်ကိုလည်း သဘောကျလို့။
အဲ့ဒီမှာ အသံနဲ့ သရုပ်ဆောင်တဲ့ လူတွေကိုလည်းကြိုက်တယ်။ ကာတွန်း ကာရိုက်တာတွေကို အပြင်က သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ကာရိုက်တာတွေနဲ့ တော်တော်တူအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ ကားလေး၊ ပြီးတော့ အသားမစား တဲ့ ငါးမန်းကလည်း တော်တော်ရီရတယ်။ Jack Black, Will Smith ပြီးတော့ တခြားလူတွေလည်း ပါသေးတယ်။
Tom Hanks ရဲ့ နာမည်ကြီး 3D ကားတွေထဲက တစ်ကားပါ။ Christmas နီးရင် လာတက်တဲ့ကားလေးပေါ့။ ကြည့်လို့တော်တော်ကောင်းတဲ့ကားပါ။
ဒီကားလေးကိုလည်း အရမ်းကြိုက်တယ်။ သူရဲ့အိုင်ဒီယာလေးကထူးဆန်းပြီး တော်တော်လေး ချစ်စရာကောင်း တယ်။
ဒီကားလေးလဲ တော်တော်ကြိုက်တယ်။ သူ့ထဲမှာပါတဲ့ ဇာတ်ဝင်သီချင်းကို ပိုပြီး သဘောကျတာလည်း ပါမယ်ထင်တယ်။ `မင်းကိုဘယ်တော့မှ ငါ့အနားကနေဝေးမှာမထားဘူးဆိုတဲ့ ` စာသားလေးကို ကြိုက်တာ လည်း ပါမယ်ထင်တယ်။ ဒီကားလေးက Fairy Tale တွေထဲမှာသိပ်ပြီး လူသိမများတဲ့ကားလေးပါ။
ကဲ အားလုံးဘဲ ခရစ်စမတ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ မထင်ရဘူး နှစ်ကူးတော့မယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။
ps. credit to people who host images. :)
ဒီနေ့ တော်မီနဲ့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒီရောက်ပြီးကတည်းက ရုပ်ရှင်ဆို သူနဲ့ပဲသွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ သွားကြည့်တယ်ဆိုပေမယ့်။ အစမ်းပွဲတွေများတယ်။ အရင် ၂ ခေါက်ကလည်း သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ နာမည်ကြီး တွေပေမယ့် သိပ်ပြီးမကြိုက်ဘူး။ ဒီတစ်ခါ သွားကြည့်တော့ တော်တော်လေးသဘောကျတယ် အဲ့ဒါနဲ့ ဘလောဂ့် မှာ တင်မယ်ဆိုပြီး တင်ဖြစ်တယ်။
ဇာတ်လမ်းက ရိုးရိုးလေးပါ။ ကောင်းလေးက သူ့ရည်းစားဟောင်းကို သီချင်းတွေရီမစ်လုပ်ပြီး ပြန်လိုက်တာ။ အဲ့ဒီကောင်မလေးက အမြဲလွှင့်ပစ်တယ်။ အဲ့ဒါကို အတန်းဖေါ် ကောင်မလေးက ကောက်ပြီးနားထောင် တတ်ပါတယ်။ မထင်မှတ်ဘဲ အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ ကောင်လေးဆုံးပြီး တစ်ညတည်းမှာတည် ချစ်သူ တွေဖြစ်သွားကြတယ်။ အမှန်တော့ ဇာတ်လမ်းက ရိုးရိုးလေးပါ။ ဒါပေမယ့် ယူထားတဲ့ ဇာတ်ကွက်နဲ့ စကားလုံးတွေ အတွေးလေးတွေက ရိုးပြီးချစ်စရာကောင်းနေတယ် ပြီးတော့ တော်တော်လည်းရီရတယ်။ ပေါ့ပါပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်မျိုးမကြည့်ရတာလည်း တော်တော်ကြာနေပြီးဆိုတော့ တော်တော်လည်း ကြိုက်မိတယ်။ တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကားလို့လည်း ထင်မိတယ်။ ၁၀ မှတ်မှာ ၉ မှတ်လောက်ပေးပါတယ်။ အရင်သွားကြည့်တဲ့ High School Musical (3) ထက်ကိုပိုကြိုက်တယ်။ High School Musical ထဲက မင်းသမီးက ပဲများနေတာနဲ့ သိပ်ပြီးကြည့်မရချင်ဘူး။ ရုပ်ရှင်ခေါ်ပြတဲ့ တော်မီကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ sample clip တချို့ကြည့်လို့ရအောင် တင်လိုက်တာပါ။